Mayelana NATHI | IPiedra (Xiamen) Sculpture Co, Ltd.
IPIEDRA (XIAMEN) ISCULP COE CO, LTD ikhethekile ekwenzeni izithombe ezibaziweyo nezithombe ezibaziweyo, njengokuqoshwa kwensimbi, izithombe zethusi, ukubaza okuqoshiwe, izithombe ze-fiberglass, njll. Lezo zithombe zethusi nemidwebo yensimbi ingasetshenziswa njengokuqoshwa kwengadi, izithombe ezinkulu ezingaphandle, umhlobiso wodonga wensimbi, imihlobiso yegceke, njll.
Sineqembu elisebenza kahle kakhulu: abaklami / abaculi abanethalente le-3D, abasebenzi bezobuchwepheshe, abathengisi abahle kakhulu, abahloli be-QC abangochwepheshe, iqembu eliqinile ngemuva kokuthengisa, elinikela kakhulu emisebenzini yethu yobuciko esezingeni eliphakeme. Umdwebo wethu wamakhowe usiza iklayenti lethu lase-USA ukuthola intengo yesi-2 kumbukiso wobuciko odumile e-USA, iklayenti lase-USA manje seliyiklayenti lethu lesikhathi eside sokubambisana, sibeka ama-oda amaningana kithi ngonyaka.
Ngeminyaka engaphezu kwengu-15 yokuhlangenwe nakho kokukhiqiza nokuthekelisa izithombe zensimbi nezithombe zethusi, singakunika ikhwalithi esezingeni eliphakeme kakhulu, umphumela omkhulu wesibuko esikhanyayo ezithombeni zensimbi engagqwali, umsebenzi omuhle wobuciko. Imidwebo yethu ikakhulukazi eyabaculi, abaklami, igalari yobuciko, abathengisi bezitolo, imisebenzi yokwakha ......
Ngenxa yokuphathwa kwekhwalithi eqinile nedumela elihle phesheya nakwasekhaya, ukubaza kwethu kuthengiselwe amazwe amaningi, i-USA, iYurophu, i-United Arab Emirates, iSaudi Arabia, i-Israel, i-Indonesia, njll., Futhi manje sinezithunywa eMalaysia, ISingapore nePhilippine, sibheke phambili izinkampani noma abantu abaningi ukusijoyina ukudala ikusasa eliqhakazile ndawonye!
Umqondo we “Ikhwalithi ephezulu, ukwaneliseka okungcono kakhulu nokwaneliseka kwamakhasimende” Ungumuntu osenkampanini yethu. Ngifisa ukuba nethuba lokukusiza !!
Uhlobo lwebhizinisi: Umkhiqizi
Umthengisi / Umthengisi omkhulu
Imakethe Ekulu: i-America esenyakatho
Inombolo Yabasebenzi: 100 ~ 150
Kumiswe unyaka: 2006
Khipha i-pc: 80% - 90%
Sihlangane namakhasimende amaningi i-onexhibition kanye negalari yobuciko. Singabalingani bamakhasimende ethu kusuka kokuxhumana kokuqala kuye emva kwensizakalo yokuthengisa. Njengomhlinzeki wezobazi ochwepheshe, sixoxa ngezidingo namakhasimende ethu futhi sihlinzekele izifanekiso zensimbi ezinkulu zona. Kanye noxhumana nabo minyaka yonke, sisungule ubudlelwano besikhathi eside futhi sathola idumela elihle kubo.
IPIEDRA (XIAMEN) ISCULP COE CO, LTD iminyaka engaphezu kwengu-10 entanjeni yebhizinisi ebaziwe, babe nokuhlangenwe nakho okucebile ekwakhiweni nasekuqambeni izithombe ezibunjiwe nezifanekiso. Ububanzi bemikhiqizo yethu ifaka phakathi insimbi engagqwali, insimbi, yethusi kanye ne-fiberglass. Zonke izinto eziqoshiwe azigcini nje ngokufakwa umhlobiso ongaphandle, njengokuphumula kwamaholide, umhlobiso wensimu, umhlobiso wolwandle, izindiza, umhlobiso wedolobha; kepha futhi nokuhlobisa kwasendlini, njengokuhlobisa amahhotela, ukuhlobisa iklabhu, ukuhlobisa inxanxathela yezitolo, imihlobiso yehhovisi, imihlobiso yasekhaya, ukubonisa igalari njalonjalo. Uyakholelwa yini emidwebweni yesimanje neyokudala, izothokozela amehlo akho futhi idedele imizwa yakho.
Ngamanye amazwi, sinethimba eliqeqeshiwe nelibambisanayo ukuze lihlangabezane nezidingo zakho. Ithimba lethu lifaka phakathi umholi obonela kude, abathengisi abanekhono, abaklami bezobuciko abahle kakhulu, abasebenzi abanolwazi oluningi, umuntu wokulawula ikhwalithi. Sinokuhlangenwe nakho okucebile kakhulu ekwakheni imidwebo nasezifundisweni ezifakiwe zokufakelwa. IPIEDRA (XIAMEN) ISCULP COE CO, LTD nakanjani kunganikeza insiza eningi njengokucela kwezikhasimende ngamunye.
Inkonzo Yethu Enhle:
01. Nikeza ezinye izithombe eziqoshiwe ezihlobene nezethenjwa yekhasimende kuqala.
02. Nikeza ngomdwebo wokudweba uma kudingeka iklayenti.
03. Nika izifanekiso ezisezingeni eliphakeme zeklayenti.
04. Idizayini yamakhasimende yemukelwa ngemfudumalo.
05. Hlela Ukuthunyelwa Kwamakhasimende.
06. Nikeza amakhasimende ukufakwa kwemiyalelo yendawo, futhi unikeze abasebenzi ukuthi bawufake esizeni sephrojekthi enkulu.
07. Nikeza ngezinsizakalo zangaphambili zokuthengisa nezangemva kokuthengisa.
08. Nikeza ezinye izindlela ezigcinwe kumakhasimende.
09. Ungaphonsela inselelo amanye amaphrojekthi anzima.
Hlala ulapha ukuze unikeze okuhle ngaphambi kwensizakalo nangemva kokuthengiswa kwensiza yakho.
IPIEDRA (XIAMEN) ISCULP COE CO, LTD sinesikhathi eside sokwenza futhi sithengise imidwebo.Iqembu lethu linabaholi abacabangayo ngaphambili, abaqambi abanamakhono, abathengisi abanekhono, izisebenzi ezinekhono, umuntu olawula i-QC, kanye nabasebenzi abanesipiliyoni. Ungaqiniseka ukuthi ungabambisana nathi. Siyakwamukela ngokufudumele ukuba ube nophenyo kithi nganoma yisiphi isikhathi, futhi sizohlala silapha ukuthola impendulo.
IPIEDRA (XIAMEN) ISCULP COE CO, LTD
I-ROOM 1407, CHANGAN BLDG, NO.75-77 LVLING ROAD, HULI DISTRICT, XIAMEN, 361009, FUJIAN, CHINA
Ucingo: 0086-13950080662, 0086-592-8264336
Ifeksi: 0086 592 5532472